Yini i-SMS? Izincazelo Zokumaketha Kwamaselula
Yini i-SMS? Ukuthumela imiyalezo nokuchazwa kweselula
NgoLwesine, July 16, 2015 NgoMsombuluko, Januwari 16, 2017 U-Adam Encane
Yini i-SMS? Yini i-MMS? Ayini amakhodi amafushane? Lithini igama elingukhiye le-SMS? Nge Ukukhangisa Kwamaselula ngokuya ngivama kakhulu ngacabanga ukuthi kungaba umqondo omuhle ukuchaza amanye amagama ayisisekelo asetshenziswa embonini yezentengiso ephathekayo.
I-SMS (Insizakalo Yomyalezo Omfushane)- Indinganiso yezinhlelo zemiyalezo yocingo evumela ukuthumela imiyalezo phakathi kwamadivayisi eselula aqukethe imiyalezo emifushane, imvamisa enombhalo kuphela okuqukethwe. (Umlayezo wombhalo)
I-MMS (Insiza Yemiyalezo Eningi) yindlela ejwayelekile yokuthumela imilayezo efaka okuqukethwe kwe-multimedia kuya nokubuya kumaselula.
I-Shortcode ejwayelekile (i-Shortcode)- Izinombolo zezinombolo ezimfushane (ngokuvamile ezinamadijithi ayi-4-6) lapho kungathunyelwa khona imiyalezo evela kuselula. Ababhalisile abangenazintambo bathumela imiyalezo kumakhodi afushane ajwayelekile anamagama angukhiye afanele ukufinyelela izinhlobo eziningi zokuqukethwe kweselula.
Keyword- Igama noma igama elisetshenziselwa ukuhlukanisa umlayezo oqondisiwe ngaphakathi kwe- Insizakalo Yekhodi emfushane.
Lawa ngamanye amagama ayisisekelo asetshenziswe ku Ukumaketha kwe-SMS. Ngisho nencazelo ye- ikhodi emfushane iningi labantu lisafuna enye incazelo yokuthi konke kusebenza kanjani ngokubambisana.
Ngizama ukukuchaza ngokwe-inthanethi nangamagama wesizinda. Cabanga nge- I-Shortcode ngokufana negama lesizinda kanye ne Keyword kufana nekhasi. Lapho ufuna izindaba ungaya kufayela le- ubugebengu (Igama elingukhiye) ikhasi le- I-CNN.com (I-Shortcode).
Noma… okungcono kakhulu, lapho ufuna ukubhalisa nge-imeyili ku Martech Zone, umbhalo Marketing (Igama elingukhiye) ukuze 71813. Kuzame… lokho umbhalo ukuze ubhalise ukuhlanganiswa phakathi kwensizakalo yethu ye-SMS kanye CircuPress!
Ukuthumela imiyalezo kungasetshenziswa ukunikela / ukukhokha imali noma ukudlulisa isixhumanisi somsebenzisi weselula ukubuka iwebhusayithi, ukuvula uhlelo lokusebenza, noma ukubuka ividiyo kumakhalekhukhwini wakhe.
Kuyini ukumaketha kwe-SMS
Amafomethi afana Iselula exhumanisayo vumela abathengisi ukuthi basabalalise igama elingukhiye ne-shortcode yabasebenzisi ukuze babhalisele imiyalezo ebhaliwe. Ngoba ukuthumelelana imiyalezo kungenelela kakhulu, abahlinzeki abaningi badinga indlela yokungena kabili. Okusho ukuthi, uthumela igama elingukhiye kwikhodi emfushane, bese uthola isicelo sibuyele emuva ukukucela ukuthi ungene ngemvume ngesaziso sokuthi imilayezo ingahle ibize izindleko ngokuya ngomhlinzeki wakho. Amapulatifomu okubhalisile akuvumela ukuthi uhlele imiyalezo futhi ubuke ukubika ngokusebenza komkhankaso.
Nayi ividiyo yokuthi kungani ukumaketha kwe-SMS kusebenza ngempumelelo:
Nanku umlando omuhle woMlayezo wombhalo ovela ku- NeonSMS:
* Lezi zincazelo ngokwe- Inhlangano Yezentengiso Yeselula. Ukuchazwa okuningi kuyatholakala ku- Iselula exhumanisayo.
Tags: isetyhulaiselula exhumanisayoAmagama angukhiyeizincazelo zeselulaamakhodi amafushaneuhlelo lomyalezo omfishaneSMSukumaketha i-smsimiyalezo ye-smsukumaketha imiyalezoimiyalezoumbhalo ukuze ubhaliseukuthumela imiyalezoyini ikhodi emfushaneyini igama elingukhiye le-smsyini mmsyini i-sms
Ukukhungatheka Kokumaketha Kwenhlangano Yezentengiso
Jul 24, 2009 ngo-10: 52 PM
Isithombe esihle, Adam! BengiseNgqungqutheleni Yokumaketha eku-inthanethi ezansi eHouston futhi omunye wabethuli wasebenzisa le ndlela. Ucele wonke umuntu ukuthi abhalele ikheli le-imeyili kanye negama eliyisihluthulelo le-shortcode futhi bazothumela isethulo nge-imeyili.
Jul 25, 2009 ku-3: 26 AM
Ngiyabonga Doug! Leyo enye yezinsizakalo esizinikezayo ku-Connective.
Okthoba 15, 2014 ngo-5: 41 AM
Ingabe ukunikezwa kwe-Connective nakho kuhlanganiswa kwe-API?
Okthoba 15, 2014 ngo-8: 50 AM
Yebo, Iselula exhumanisayo ine-API ephelele.